Zụrụ Unisex Nature Grey Hair Dye Ude - Mbupu Na-akwụghị ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
Unisex Nature Grey Hair Dye Ude
Unisex Nature Grey Hair Dye Ude na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Akwụkwọ ikike imepụta: 223423432525
Nọmba Nlele: 763421
Aha: Ude Na-acha Agba Agba
:Dị: Ntutu ntutu
Igwe ntutu: Universal
Nrụ ọrụ: Agba agba
O nwere ihe ohuru iji chebe ma nye agba mara mma na ntutu achọrọ.
Mepụta mara mma, nwayọ, na silky isi awọ mmetụta.
Isi ude ntutu nwere ihe na-arụ ọrụ ma dị ike nke na-ewepụta agba na ntutu na-adịgide adịgide.
Nchekwa ma dị mfe iji na mmetụta na-adịte aka.
Okwesiri maka ụdị ntutu niile, ntutu ụmụ nwanyị ma ọ bụ nke ụmụ nwoke.
1 x nke Agba agba agba agba
Mbupu na nnyefe dị ogologo, ọnwa 2,5,
Enweghị oxygenu nejde aplikovat. Použila jsem nke a maka obrázku. 1: 1, ọ dịghị zesvětlení. Jsem spokojená držte se návodu
sa me plait, ịkọwapụta nkọwa